Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka oo farriin culus u dirtay madaxda Somalia - Caasimada Online
Home Warar Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka oo farriin culus u dirtay madaxda Somalia
Washington (Caasimada Online) – Waaxda arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa ka hadashay is-mari ka taagam doorashada Soomaaliya, xilli madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu waqtigu ka dhacay ayada oo aan doorasho lagu heshiin.
“Dib u dhigista doorashada waxay waxyeeleeneysa dadaallada loogu jiro la-dagaalanka aragagixsada, waxeyna sare u qaadeysaa halista xasilooni-darrada Soomaaliya,” ayuu yiri Afayeenka waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka.
Price ayaa sheegay in hogaamiyayaasha qaranka iyo kuwa gobollada ay mas’uuliyad ka saaran tahay inay ku shaqeeyaan danta shacabka, kuwaas oo mudan inay waxa ugu wanaagsan ka helaan hogaamiyayaahooda.
“Doorashooyin dhinac, doorashooyin is-dhinac socda, hanaan doorasho oo aheyn midkii hore, oo ay ka mid tahay dhisidda gole ku-meel gaar ah, waxay sare u qaadi doonaan xasilooni darrada Soomaaliya,” ayuu yiri.
Waxa uu sidoo kale sheegay in Mareykanka uu kasoo horjeedo in dhinacna uu rabshado adeegsado, balse uu doonaya Soomaaliya oo horumarsan oo dimqoraadi ah.